Miisaanka Fujita: waa maxay, astaamaha iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Sidaad filan karto, sida ay u le'eg tahay cabbiraadda duufaannada iyo dhulgariirrada, sidoo kale waxaa jira miisaan lagu cabbiro xoogga duufaanka. Miisaankani waxaa loo yaqaanaa Miisaanka Fujita. Waa miisaan matalaya heerarka xoog iyo karti ee waxyeello uga yimaada duufaannada.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan sifooyinka iyo muhiimadda miisaanka Fujita.
2 Miisaanka Fujita
3 Dhinacyada miisaanka Fujita
4 Miisaanka la hagaajiyay
Ugu horreyntii, waa inaan ogaanno waxa ay tahay tornaado iyo astaamaheeda. Duufaanta duufaanku waa hawo tiro badan oo samaysa xawaare sare leh. Dhammaadka duufaanta waxay ku taal inta u dhexeysa dusha sare ee Dhulka iyo daruur cumulonimbus ah. Waa astaamaha jawiga hawada ee duufaanka leh qaddarka badan ee tamarta ah, in kasta oo ay sida caadiga ah muddo yar socdaan.
Markii aan ogaano waxa ay tahay tornaado, waxaan aragnaa in miisaanka Fujita loo adeegsaday in lagu qiyaaso xoogga duufaanta. Waa cabir mas'uul ka ah kala saarida duufaannada iyadoo loo eegayo darnaanta iyadoo lagu saleynayo waxyeelada ay geysan karaan. Qiyaastan waxaa abuuray 1971 cilmi baaraha Waqooyiga Ameerika Tetsuya Theodore Fujita, khabiir ku takhasusay cilmiga saadaasha hawada oo kaashanaya Allan Pearson, Xarunta Saadaalinta Duufaanta (saadaasha duufaanka) ee Mareykanka. Waxaa isla markiiba qaatay bulshada cilmiga iyo cimilada.
Qiyaasta Fujita waxay isku dayeysaa inay dhisto xoogga dabaysha iyo awoodda waxyeellada u geysan karto. Aan aragno maxay yihiin qodobbada kaladuwan ee cabirka duufaankani leeyahay:
Dabayl xoog leh F0: Waa qayb ka mid ah miisaanka sharraxaya jiritaanka xawaaraha dabaysha u dhexeysa 60-120km / h. Halkan dhaawaca la arkay waa jajabka laamaha, cilladaha calaamadaha taraafikada, anteenooyinka telefishanka qalloocan, iwm. Waxay yihiin waxyeelo yar yar oo aan keenin dhibaatooyin daran.
Dabayl xoog leh F1: Waa dabaylo dhexdhexaad ah oo xawaare u dhexeeya 120-180 km / saacaddii. Waxyeello u geysata sida jabinta alwaaxyada dhulka, gawaarida rooga rogmada, gawaarida burbursan, iwm.
Dabayl xoog leh F2: Kuwani waa dabaylo xawaarekoodu u dhexeeyo 180 ilaa 250 km / saacaddii. Xawaarahaan dabaylaha, waxaan aragnaa in waxyeelada dhacdaa ay tahay jajabka darbiyada iyo saqafyada guryaha.
Dabayl xoog F3: waa xooggaas oo dabaysha ku soo qaada xawaare u dhexeeya 250 iyo 330 km / saacaddii. Xawaarahaan dabaysha, waxaan ku aragnaa inay jiraan waxyeello la arki karo, sida guud ahaan burburka darbiyada iyo saqafyada guryaha, gebi ahaanba kaymaha, iwm. Xaaladahaas oo kale, waxaan arki karnaa derbiyada iyo saqafyada guryaha oo duulaya sababo la xiriira xawaaraha daran ee dabaysha.
Dabayl xoog F4: waxay u dhigantaa xawaaraha dabaysha ee u dhexeysa 330 illaa 420 km / saacaddii. Halkan waxaan ku aragnaa waxyeelo si xoog leh loo soo saaray sida dhismayaal aan aasaas lahayn iyo gawaari gabi ahaanba rogmaday. Awoodda duufaannada daran ee dabaylaha daran welwel badan tan iyo markii ay galaafato nolosha dadka.
Dabayl xoog leh F5: waxay u dhigantaa dabaylaha ugu daran ee qiimahoodu u dhexeeyo 420 ilaa 510 km / h. Khasaaraha uu geeystay ayaa ah gebi ahaanba dhismooyin burburay, tareenno barakacay, iwm. Waa heerka ugu sarreeya miisaanka Fujita iyo welwelka ugu badan.
Dhinacyada miisaanka Fujita
Qeybo ka mid ah cabirkaan tornaadooyinka waa in la tixgeliyaa, sida in aysan tixgelin siinin tayada dhismaha dhismayaasha burburay. Taasi ka dib dhinac muhiim ah oo la tixgelinayo maaddaama ay jiraan dhismayaal badan oo hooseeya tan iyo markii ay gaboobeen ama lagu dhisay waxyaabo rakhiis ah. Xaaladahaas oo kale, xoogga duufaanta looma qiyaasi karo inay tahay waxqabadka awoodda burburka isla saxsanaantaas.
Waxaa jira daraasado badan oo muujiyay taas miisaanka Fujita wuxuu si xad dhaaf ah u qiimeynayaa qeybaha xawaaraha dabaysha 3, F4 iyo F5. Tani waa sababta oo ah tayada qalabka laga soo dhiso dhismayaasha ka dillaaca xilliyada duufaannada la tixgelinayo. Sidaa darteed, waxaa jira nooc kor loo qaaday oo ka mid ah miisaankan oo ay abuureen Adeegga Cimilada Qaranka ee Mareykanka sanadkii 2006 oo hadda ku saleysan 28 tilmaamayaasha waxyeellada, iyadoo la tixgelinayo noocyada dhismayaasha ama dhismayaasha. Iskeelka Fujita ee La Kordhiyay ama EF (Enhance Fujita) waa cabir qiimeyn ah oo loogu talagalay xoogga duufaannada waxyeelada ay geysatay awgeed. Waxaa laga isticmaali jiray Mareykanka tan iyo xagaagii 2007.
Miisaanka la hagaajiyay
Aan aragno maxay yihiin qodobbada kaladuwan ee lagu falanqeeyay qiyaasta Fujita ee la hagaajiyay:
EF0 : Qaybaha qeyb ahaan laga saaray saqafka (marmarka, dusha sare), marinnada biyaha hoostooda, qiiqyada iyo dhinacyada waxyeelloobeen.
EF1 : Qaybaha saqafka oo gebi ahaanba la saaray, albaabbadii bannaanka laga saaray, daaqadihii oo jabay.
EF2 : Saqafka kore ee guryaha adag, guryo gebi ahaanba burburay, geedo waaweyn oo jabay ama la rujiyey.
EF3: Dabaqyada guryaha adag ee burbursan, tareennada rogmaday, geedaha jilicsan, gawaarida kor loo qaaday.
EF4 - Guryo si wanaagsan loo dhisay iyo baabuur la afuufay, waxyaabo badan ayaa gantaallo isu beddelay.
EF5: Guryo adag oo daadku qaaday iyo walxaha cabbirka baabuurta ayaa hawada lagu nuugaa.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto miisaanka Fujita iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Miisaanka Fujita